Kaniisadda, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Sawir qurxoon oo qurux badan ayaa kaniisada uga hadlaya sida aroosadda Masiix. Astaamaha aayadaha kala duwan, oo ay kujirto Heesta Gabayga, ayaa tilmaamaysa. Meel muhiim ah ayaa ah Heesta Heesaha 2,10: 16, halkaasoo aroosadda gacaliyaheeda ay sheegto in xilligeedii jiilaalka uu dhammaaday haddana waqtigii heesaha iyo farxadda ay timid (sidoo kale eeg Cibraaniyada 2,12), iyo sidoo kale halka ay aroosaddu ku leedahay: "saaxiibkay aniga ayaa iska leh oo aniga ayaa ah" (St. 2,16). Kaniisadda waxaa iska leh shaqsi ahaan ama si wada jir ahba Masiixa oo isagaa iska leh Kaniisadda.
Masiixu waa arooskii "jeclaaday kaniisadda oo naftiisa u huray" si ay u noqoto "kaniisad sharaf leh oo aan lahayn wasakh ama duuduub ama wax la mid ah" (Efesos 5,27). Bayaankan, ayuu yidhi Paul, "waa qarsoodi weyn, laakiin waxaan u tilmaamayaa Masiixa iyo kaniisadda" (Efesos 5,32).
Yooxanaa wuxuu ka qaadanayaa mowduucan kitaabka Muujintii. Masiixa guuleysta, Wanka Ilaah, wuxuu guursadaa aroosadda, kaniisadda (Muujintii 19,6: 9-21,9; 10), oo waxay si wada jir ah ugu dhawaaqayaan ereyada nolosha (Muujintii 21,17).
Waxaa jira tusaalooyin dheeraad ah iyo sawirro loo isticmaalo in lagu qeexo kaniisadda. Kaniisaddu waa adhiga u baahan adhijirrada daryeela oo daryeela iyaga oo raacaya dariiqa Masiixa (1 Butros 5,1: 4); waa goob loo baahan yahay in shaqaalaha laga beerto iyo biyo la siiyo (1 Korintos 3,6: 9); kiniisadda iyo xubnahooduba waa sidii geed canab ah oo canab ah (Yooxanaa 15,5); kaniisaddu waa sida geed saytuun ah (Rooma 11,17-24).
Iyada oo ka tarjumaysa boqortooyada Ilaah ee hadda jirta iyo tan mustaqbalka, kaniisadda waxay u eg tahay iniin khardal ah oo ku koray geed ay shimbiraha cirku magan galaan (Luukos 13,18: 19); iyo sida khamiir dhex socda cajiinka dunida (Luukos 13,21), iwm.
Kaniisaddu waa jidhka Masiixa waxayna ka kooban tahay dhammaan kuwa Ilaahay u aqoonsaday inay xubno ka yihiin "Kaniisada Sadaqada" (1 Korintos 14,33). Tani waxay muhiim utahay qofka rumaystaha ah maxaa yeelay kaqaybgalka bulshada ayaa ah dariiqa aabaha uu nagu ilaaliyo oo uu nagu sii hayo ilaa Ciise Masiix uu soo noqdo.